Comments Off na Grabyo Partners na Dejero iji meziwanye ikike imepụta ihe
Ndị otu na - emepụta ihe nwere ike ijide ma bulie vidiyo na - enweghị eriri gaa igwe ojii nke igwe ojii na - emepụta ihe site na iji Dejero ngwọta New York, NY na Waterloo, Ontario, Mee 18, 2021 - Grabyo esorola Dejero rụkọọ ọrụ iji nye ndị mgbasa ozi, ndị mbipụta na ndị nwe ọdịnaya nwere njedebe dị mfe - mezie ngwọta maka mmepụta na nkesa vidiyo dịpụrụ adịpụ. A na - ejikọ ndị na - ebugharị mkpịsị aka nke Dejero na ihe ngwọta njem vidio ugbu a n'ime igwe ojii igwe ojii nke Grabyo, nke na-enye mmepụta mgbasa ozi dị ndụ, nkenke ndụ, ndezi ngwa ngwa na nkesa vidiyo. Ngwọta a jikọtara ọnụ na-enyere ndị nrụpụta aka ịnapụta ọdịnaya dị n’ọtụtụ mgbasa ozi, ntanetị na nyiwe mmekọrịta n’otu oge site na ebe ọ bụla ...
Comments Off na Magewell na-eme afọ iri nke Video I / O, Gụgharia na IP Workflow Innovation
Companylọ ọrụ dị mpako inyere ndị ọrụ aka imezu ebumnuche ha site na ngwọta dị ọnụ ala ma dị mfe iji jupụta akara, ngwanrọ, iyi, na ngebichi Mee 18, 2021 - Nanjing, China: Ihe nlere vidiyo na onye na-arụ ọrụ ọrụ IP Magewell na-eme emume ncheta nke iri na ọnwa a. . Na-eto eto site na mgbọrọgwụ ya dịka ụlọ ọrụ ngwaike ngwanrọ maka ndị mmepe sọftụwia nke atọ, ụlọ ọrụ ahụ eguzobewo onwe ya dị ka onye ndu ụwa zuru oke na njide vidiyo, ntughari, na iyi egwu na-enyere aka ịmepụta vidiyo na ndị ọkachamara AV na-eme nke ọma na teknụzụ mgbasa ozi na-agbanwe agbanwe. odida obodo. Magewell nọrọ afọ mbụ ya na azụmaahịa dịka ụlọ ọrụ injinia, na-emepe emepe siri ike ...
Comments Off na Rohde & Schwarz na-eweta enweghị ntụpọ Ultra HD mma ka R & S®VENICE
Ihe ntanetị ihe ntanetị na-enweta nkwado zuru ezu maka 2SI Rohde & Schwarz, onye ndu ụwa na teknụzụ mgbasa ozi mgbasa ozi agbatịwo arụmọrụ nke ikpo okwu R & S®VENICE maka imepụta ụlọ ọrụ ndụ. Karịsịa, ọ kwagara ịkwado akara 4k Ultra HD, na-eji usoro 12G ma ọ bụ 2SI. VENICE bụ arụmọrụ dị elu, usoro mgbasa ozi dị elu ezubere iji jikwaa ihe mgbaàmà mgbagwoju anya na ihe nchekwa chọrọ, ọkachasị na ngwa imepụta ihe nkiri. Ọ na - enye arụmọrụ na - enweghị nsogbu gụnyere ndekọ ahaziri ahazi, mgbanwe vidiyo na ndozi, gafee netwọkụ nke ndị nhazi yana nchekwa Rohde & Schwarz na ngalaba ndị ọzọ nwere nchekwa nchekwa nke atọ. Ọ na-ejikọkwa ...
Comments Off na ndagwurugwu Grass na-ewusi Ọchịchị Ahịa na Middle East ike na Nhọpụta Ọhụrụ nke Hany Bartella
MONTREAL - Mee 18, 2021 - Grass Valley na-eme ka usoro nduzi ya na ntinye aka ya dị elu na Middle East na nhọpụta nke Hany Bartella dị ka onye isi njikwa, Middle East na Africa. N'iji ahụmahụ 25 afọ na obodo ndị na-ere mgbasa ozi, Bartella sonyeere Grass Valley iji nyere aka mee ka ọnụnọ ahịa ya pụta ma kwado ndị ahịa na mpaghara ahụ. Bartella nwere ọtụtụ ọrụ ya na ndị na - ebubata ngwaahịa dị iche iche na ọrụ ya niile na - arụ ọrụ, na - enye ya ahụmịhe gafee ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dị iche iche, gụnyere nnweta na imepụta ihe, ịkparịta ụka na akụrụngwa, imepụta post na ibi egwu. Ọ sonyere na ndị otu njikwa EMEA nke Grass Valley na azụmaahịa ...
Comments Off na Radio Televisyen Malaysia (RTM) na-etinye IDS Densitron
Crawley, UK, 18 May 2021 - Densitron, onye ndu ụwa niile na mmekọrịta mmadụ na igwe ọhụrụ (HMI) na teknụzụ ngosi, ekwuputala na Radio Televisyen Malaysia (RTM), etinyela ihe ngosi ọgụgụ ọgụgụ ọgụgụ ọgụgụ zuru oke (IDS) site na Densitron maka mgbasa ozi ya ụlọ ọrụ dị na Kuala Lumpur. IDS bụ njikwa agnostic na-egosipụta na ngosiputa ngosipụta nke jikọtara na, na njikwa, ihe niile akụrụngwa teknụzụ mgbasa ozi dị egwu dị ka ebe egwuregwu, akpaaka, usoro ihe omume, njikwa ụlọ na sistemụ AV. Ihe dị mfe nke IDS bụ ike ya. UI mara mma na-enye ndị ọrụ ohere n'ọkwa ọ bụla itinye aka na IDS iji nyefee ọtụtụ ngwa dị mgbagwoju anya na aka ...
Comments Off na ATEME na-eweta Latency Mgbasa Latia Via Just-In-Time Packagers na World Mbụ
ATEME, onye ndu nke ihe nzipu vidiyo maka mgbasa ozi, TV TV, DTH, IPTV na OTT, taa na-ekwuwapụta na ngwugwu NEA-Live® Just-in-Time (JIT) ugbu a na-enye ọkwa ọkwa dị ala na ọnọdụ nkwụsị maka HLS abụọ na DASH. Mmelite ndị a mere ATEME ka ọ bụrụ onye izizi wetara ahịa JIT dị ala - ihe ịma aka dị mgbagwoju anya nke ATEME meriri site na iji teknụzụ nke ya. Ọhụrụ nkwalite na NEA-Live nwere nnukwu pụtara n'ihi gụgharia na enye ọrụ. Ha ga - enwe ike iji ngwugwu ahụ nyefee ọdịnaya gụgharia na ọnọdụ ịdị latency, ma na-ekpori ndụ arụmọrụ ka ukwuu ...